Mpanakanto Maleziana roa miatrika ny famotopotoran’ny polisy noho ny fanehoan-kevitra an-tserasera sy ny zavakanto · Global Voices teny Malagasy
Takian'ny vondrona ny fanafoanana lalàna hanakanana ny fahalalahana maneho hevitra
Voadika ny 20 Mey 2021 4:20 GMT
Pikantsarin'ny filaharan-kira Spotify ‘This is Dengki Ke’ noforonin'ny mpanakanto Fahmi Reza.
Miatrika ny famotopotoran'ny polisy noho ny lahatsoratra tao amin'ny tambajotra sosialy heverina ho nanivaiva ireo manampahefana ny mpanakanto Maleziana Fahmi Reza sy Zunar.
Notanana iray andro i Fahmi ny 23 Aprily taorian'ny nandraisan'ny polisy fitoriana momba ny fanivaivana nitranga tamin'ny fandaharan-kira Spotify izay navoakan'ilay mpanakanto. Misy hira miisa 101 ny fandaharan-kira mitondra ny lohateny hoe “Dengki Ke” (“fialonana”). Voalaza fa nanivaiva ny Mpanjakavavy Maleziana Azizah Aminah Maimunah Iskandariah izany.
Nalaza tao amin'ny Twitter tamin'ny 19 Aprily ny tenirohy #Dengkike taorian'ny nanontanian'ny mpisera Instagram iray ny Mpanjakavavy raha marina ny tsaho fa efa natao vaksiny COVID-19 ny mpiasany manokana. Voalaza fa namaly toy izao ny Mpanjakavavy: “Dengki ke?” (“Mialona ve ianareo?”). Talohan'izay no efa voatsikera ny fianakavian'ny mpanjaka taorian'ny tatitra fa misy ny mpikambana ao aminy natao vaksiny anefa mbola tsy neken'ny governemanta akory.
Nahazo fahafahana vonjimaika i Fahmi saingy mbola mitohy ny famotopotorana azy raha toa ka nanitsakitsaka ny andininy faha 4 (1) amin'ny Lalànan'ny Fampisaraham-bazana sy andininy faha 233 amin'ny Lalànan'ny Serasera sy ny Fampitam-baovao marolafy (CMA) izy. Manondro ny fandefasana votoaty manafintohina amin'ny aterineto miaraka amin'ny “fikasana hanorisory” ny andininy faha 233.
Talohan'ny nisamborana azy dia niaro ny zon'ny mpanakanto i Fahmi mba hanehoana ny tsy fitovian-kevitra:
Ao amin'ny firenena izay nanasiana sivana, nisamborana ary nanagadrana mpanakanto, ny mpamorona ary ny mpanao sariitatra noho ny zavakantony, zava-dehibe ny hitohizan'ity endrika fanehoana hevitra ara-javakanto tena ilaina ity, ny fakana tahaka sy ny fanesoesoana mba ho endrika fanoherana ara-politika sy ny hiarovana izany amin'ny fomba rehetra.
Tsy vao sambany no niharan'ny antsojay noho ny asany an-tserasera i Fahmi. Norahonan'ny manampahefana izy tamin'ny taona 2016 noho ny famoahana sary mahatsikaiky maneso ny Praiminisitra teo aloha Najib Razak, izay voarohiroy tamin'ny tantara ratsin'ny kolikoly.
Tamin'ny volana Martsa 2021 lasa teo, nahazo taratasy avy amin'ny polisy i Fahmi fa hanaovana fanadihadiana ny sioka roa nataony noho ny filazana fa nanala-baraka ny Minisitry ny Fahasalamana ao amin'ny firenena. Nohadihadian'ny polisy nandritra ny adiny roa izy tamin'ny 10 Martsa lasa teo.
Nanasongadina ny raharaha Fahmi ny Freedom of Expression Cluster, Vonam-Pahalalahana Maneho Hevitra, izay nokarakarain'ny vondrona fiarahamonim-pirenena, mba hitakiana ny fanavaozana na ny fanafoanana ny lalàna, ao anatin'izany ny Lalànan'ny Fampisaraham-bazana sy CMA, izay nolazain'izy ireo fa ataon'ny manampahefana fanararaotana mba hampanginana ny tsikera. Tao anatin'ny fanambarana niraisana nivoaka tamin'ny 23 Aprily, nanampy ny vondrona fa endrika fanehoan-kevitra ara-dalàna ny esoeso:
Mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny esoeso ho sehatra fanehoan-kevitra, fifanakalozan-kevitra ary adihevitra momba ny soatoavina ifampizarana. Indrindra ny esoeso politika izay mitana andraikitra lehibe hifaneraserana amin'ny fahefan'ny andrim-panjakana amin'ny fomba izay miteraka sehatra ho an'ny hehy. Tokony harovana ho toy ny ampahany lehibe amin'ny fandraisan'ny besinimaro anjara ny sehatra toy izany, hanomezana sehatra matanjaka ho an'ny fifaneraseran'ny daholobe sy ny demaokrasia velona izay mahazaka ny fitsikerana sy ny tsy fitovian-kevitra.
Mandritra izany fotoana izany, nanoratra ilay mpanao sariitatra Zunar tamin'ny 28 Aprily fa nahazo fampandrenesana avy amin'ny polisy izy fa nanaovana fanadihadiana ny sariitatra politika navoakany tamin'ny volana Janoary noho ny mety ho fanitsakitsahana ny andininy faha 233 tamin'ny CMA.
Nantsoin'ny polisy, mba hohadihadiana noho ny sariitatra nataoko, izay navoaka ny 23 Jan. Fehezan-dalàna famaizana 505c sy lalàna andininy faha 233 amin'ny Lalànan'ny Haino Vaky Jery. Hiatrika ny IPD Padang Terap, ao Kedah amin'ny 2 Mey, amin'ny 11 ora maraina
Miresaka momba ny fanapahan-kevitry ny governemantan'ny fanjakana Kedah ny tantara an-sary mba tsy hanaovana ho fety andro tsy iasana andraisan-karama ny Thaipusam, fetiben'ny Haindò isa-taona, noho ny fepetran'ny famerana napetraky ny governemanta federaly tamin'ny COVID-19. Notsikerain'ny vondrona sasany ny fanapahan-kevitr'ireo tompon'andraikitra ao Kedah izay nampitandrina fa mety hanelingelina ny firindrana ara-poko ao amin'ny fanjakana izany.
Niaro ny zony haneho hevitra momba ny fanjakana niaviany i Zunar ary nanamafy fa azo adika amin'ny hevitra isankarazany ny sariitatra nataony.
Toa an'i Fahmi, notoriana [mg] ihany koa i Zunar teo aloha noho ny sariitatra [tantara an-tsary] nataony izay heverina ho manafintohina ny PM Najib. Noraran'ny governemanta ny bokiny teo aloha ary nosakanana tsy hanao fampirantiana izy mandra-paha resy ny governemanta Najib tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2018.
Nampitandrina i Nalini Elumalai, tompon'andraikitry ny Programa Malezia ARTICLE 19 fa mety hiteraka hatezerana eo amin'ny fiarahamonina ny famotorana ataon'ny polisy amin'i Fahmi sy Zunar:
Ohatra iray hafa amin'ny tsy fandeferan'ny governemanta Maleziana ny tsikera ampahibemaso ny fanadihadiana atao amin'i Zunar. Manakana ny fanehoan-kevitra ara-pamoronana, mampangatsiaka ny fifanakalozan-kevitra ampahibemaso, ary manimba ny fitokisana ireo manampahefana Maleziana ny fanenjehana ireo mpanakanto toa an'i Zunar sy Fahmi.